पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पर्समा यी ५ मध्ये एक चीज राख्नुहोस्: कहिलै हुँदैन् पैसाको कमी !
-गोजीमा श्रीयंत्र राख्नले पैसा सग जोडिएका सबै काम कुराहरुमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधै आफ्नो पर्स मा राख्नुहोस। -पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुन्छ। तपाइको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन ।